नभएका कुरा उछालेर सत्य छोप्ने काम नगरौं : सञ्चारमन्त्री बास्कोटा - OpticalKhabar
होमपेज मुख्य समाचार राजनीति नभएका कुरा उछालेर सत्य छोप्ने काम नगरौं : सञ्चारमन्त्री बास्कोटा
नभएका कुरा उछालेर सत्य छोप्ने काम नगरौं : सञ्चारमन्त्री बास्कोटा
DoroNepal Reporter 7:20 PM मुख्य समाचार, राजनीति,
काठमाडौं : सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकमा भ्रम फैलाइएको भन्दै नभएका कुरा उछालेर सत्य नछोप्न आग्रह गरेका छन्। सरकारको पछिल्लो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले नकारात्मक हल्ला मात्रै फैलाइएको बताएका हुन्।
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भने, 'दर्ता हुने विषयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता दर्ता गर्ने हो कि जसरी गरी हल्ला फिजाइएको छ, त्यो खारेज गर्छु। नेताहरुले कानुनी हिसाबले बोल्नु पर्‍यो नि। बजार हल्लाको भरमा वा पूर्व दृष्टिकोणको आधारमा होइन।'
उनले युट्युबमार्फत सत्य कुरा लुकाएर सरकारका विरुद्ध नागरिक लगाउन सकिन्छ कि भन्ने फोस्रो प्रयास गरिएको आरोप पनि लगाए। साधारण मान्छेले न्याय पाउने कि नपाउने भन्दै उनले प्रश्न गरे। सरकारले कानुन सबैका लागि बराबरी भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न खोजेको उनको दावी थियो।
'सत्य छोपेर चलाइएको र्‍युमर बेलुन हुन्छ। सानो छेस्कोले छोएपछि सक्कियो,' उनले भने। सामाजिक सञ्जालमा लेखे वापत् नै १५ लाखसम्म जरिवाना कुरा पनि सत्य नभएको उनको जिकिर थियो। उनले कस्ता कुरा लेखेमा जरिवाना हुने भन्ने कुरा बुझ्न आग्रह गरे। सत्य कुरा छोपेर भ्रम नफैलाउन पनि उनले दलिल थियो।
उनले नाम चलेकै मिडियाले आफूलाई गाली गर्नका लागि परिवारका सदस्य जोडेको बताए।
बास्कोटाले भने, 'मेरो आमाको निधन भइसक्यो। मेरो आमालाई गाली किन? मेरो बाबु आमा छोराछोरीलाई जोड्ने किन?'
जसले सामाजिक सञ्जाल चलाउँछु भन्छ त्यो दर्ता हुनुपर्ने उनले बताए।
Posted by DoroNepal Reporter at 7:20 PM